Bixinta Taageero Taageero Waxbarasho ee Caruurta ah
The Saint Paul Promise Neighborhood (SPPN) waa qorshe bulsho oo ballaaran oo bixiya taageerada tacliimeed iyo bulsho ee caruurtu u baahan yihiin inay ku guuleystaan dugsiga iyo nolosha. Xaafaddu waa aag 250-square ah oo ku taala bartamaha magaalada St. Paul ee xaafadaha taariikhiga ah ee Frogtown iyo Summit-University. Qiyaastii boqolkiiba 80 ee deganayaasha SPPN ayaa ah midab - oo leh African American iyo Hmong oo ka dhigaya kooxaha ugu ballaaran, laakiin sidoo kale waxaa ka mid ah muhaajiriinta Afrika, Latinos, iyo kuwo kale. SPPN waa dadaal isuduwid ah oo ah isbahaysi ah oo ah sagaal wada-shaqeeye oo ay ka mid yihiin Amherst H. Wilder Foundation, iyo in ka badan 70 hay'adood oo dheeraad ah. Barnaamijka Waxbarashada & Waxbarashada ee McKnight, Wilder wuxuu helay deeq lacageed oo lagu taageerayo SPPN.
SPPN waxay soo saartey xalal joogto ah iyo kaabayaasha ku wareegsan halkaas oo dhammaan carruurta la ansixiyo, lagu qiimeeyo, loo horumariyo dhaqanka hanti, iyo meelaha ay ugu dambeyntii ay ku guuleysan karaan.
SPPN waxa ay hirgelisay Dugsiyada Difaaca Caruurta (CDF) Iskuulada Freedom Schools si loola dagaallamo khasaarada xagaaga ee ardayda. Muddo lix todobaad ah inta lagu jiro xagaaga, in ka badan 180 carruur ah ayaa dhigta Dugsiga Sare ee SPPN ee Harambee. Harambee waa erayga Swahili oo micnaheedu yahay "dhamaantood isku jiidan", taas oo ah waxa ay ardaydu sameeyaan subax kasta sida iskuulku isugu yimaado si aad u sarreeya, qosol badan, farxaan "farxad leh" si ay isugu diyaariyaan maalintooda. Ka dib subaxdii subaxnimadood, ardayda waxay ka shaqeeyaan waxqabadka akhriska waxayna leeyihiin dhaqdhaqaaqyo kobcin dhaqameed galabtii. Waalidiinta waxay sidoo kale ku hawlan yihiin cunto fudud toddobaadlaha ah iyo Tababarka Waalidka Awood-siinta, kuwaas oo sii wata isku xirnaantooda isla markaana cusbooneysiiya dhacdooyinka dugsiga.
SPPN waxay soo saartey xalal joogto ah iyo kaabayaasha ku wareegsan halkaas oo dhammaan carruurta la ansixiyo, lagu qiimeeyo, loo horumariyo dhaqanka hanti, iyo meelaha ay ugu dambeyntii ay ku guuleysan karaan. SPPN waxay bixisaa taageerooyin ku saabsan taageerada carruurta iyo qoysaskooda laga bilaabo dhalashada ilaa kulliyad iyo xirfad shaqo, oo leh xarumo buuxa oo adeega xarunta.
Iskoolka Degmada Independent 286, Brooklyn Center
Siinta Macalimiinta Voice ee Mustaqbalka Waxbarashada
Isbeddel yaryar ayaa u horseedaya Saameyn weyn ee Diyaargarowga Xannaanada